Al Shabaab oo weeraray Waqooyi Bari Kenya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Al Shabaab oo weeraray Waqooyi Bari Kenya
Al Shabaab oo weeraray Waqooyi Bari Kenya
Xoogaga Ururka Al-Shabaab, ayaa markale weerar ka gaystay Gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan Shan ka mid ah Ciidanka Booliska Kenya, halka tiro Toban ka badana ay ku dhaawaceen.
Shabaabka, ayaa wadada u galay gaadiid ay la socdeen Ciidanka Kenya oo ka dhaqaaqay Deegaanka Kotulo, oo hoos-tagta Ceelwaaq Kenya. Ceelwaaq waxay degaan ahaan hoos-tagtaa Degmada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Ciidanka la weeraray oo ku sii jeeday Deegaanka Ceel-raam, ayaa loo galay tuulada Kamoore, waxayna dadka degaanku sheegeen in weerarkaasi uu ku bilowday gantaalaha garbaha laga tuuro, oo ay Shabaabku ridayeen.
Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Ammaanka ee Degaanka Ceelwaaq, Daniel Bundotich, ayaa sheegay Shabaabku inay soo weerareen Ciidanka Booliska, xilli ay ku guda jireen buu yiri roondo.
Gudoomiye Kuxigeenka, ayaa xaqiijiyay in shan askari oo laba ay Saraakiil yihiin in looga dilay weerarkaasi, halka 36 askari oo kale oo roondada ka qayb qaadanayay ay qaarkood ku dhaawacmeen weerarka dhaba-galka ah. Waxaa uu tilmaamay in inta badan dhaawacyada askartu yihiin kuwo fudud.
Daniel Bundotich, ayaa sidoo kale qiray in dagaalka ay Shabaabku ku gubeen mid ka mid ah gaadiidka xamuulka ee Ciidanka Boolisku leeyihiin, Sida uu sheegay Ciidanka Boolisku waxay wateen laba gaari oo qura, xilligii la soo weeraraayay.
Sida uu dhawaajiyayba Daniel Bundotich waxay Ciidanka Booliska la soo baxsadeen gaarigii kale, oo dhaawacyada lagu keenay Deegaanka Ceelwaaq, Sarkaalkan ma sheegin haddii weerarkaasi ay khasaaro ku gaarsiiyeen Shabaabka iyo haddii kalaba.
Dhanka kale Idaacadda Andalus oo ku hadasha afka Ururka Al Shabaab, ayaa baahisay in weerarka ka dhacay Degaanka Kotulo lagu dilay lix ka mid ah Ciidanka Booliska Kenya, oo Saraakiil ay ku jiraan, Shabaabku waxay kaloo sheegteen in weerarkaasi ay ku burburiyeen gaari xamuul ahaa, oo sahay u siday Ciidanka Kenya.
Axadii, ayay ahayd markii Shabaabku ay askar Kenyan ahi ku dileen Degaanka Ijaara oo hoos-tagga Magaalada Garissa ee Xarunta Gobolka Waqooyi Bari.